अनामनगर क्लबले गर्‍यो सरसफाइ
मुख्य पृष्ठवाग्मतीअनामनगर क्लबले गर्‍यो सरसफाइ
काठमाडौँ/अनामनगर युवा क्लबले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २९ का विभिन्न स्थानमा सरसफाइ गरेको छ ।
युवा क्लबले शनिबार अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार लगायतका १८ स्थानमा डसरसफाइ गरी डस्टबिन राखेको छ । क्लबका दर्जनभन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा वडा नं. २९ भित्र पर्ने मुख्यचोक तथा सहायक सडकहरुमा सरसफाइ गरी डस्टविन राखिएको हो ।
क्लबको सरसफाइ अभियानबाट स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । क्लबले समाजमा रहेका विकृतिविरुद्ध सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरी असल नागरिक उत्पादन गर्ने काम गरेको स्थानीय हरिप्रसाद गिरीले बताए ।
उनले भने, ‘क्लबले राम्रो काम गरेको छ । सरकारले गर्ने काम भाइबैनीहरुले गरिरहनुभएको छ । यस्तो कामलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर लानुपर्छ । राज्यले, स्थानीय सरकार सबैले सहयोग गरेर असल नागरिक उत्पादन गर्ने कुरामा टेवा दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कानुनमाथि नै धावा : बार पूर्वअध्यक्षहरू
नबिल किताब जात्रा–२०७७ हुने
खानेपानी मन्त्रीद्वारा मेलम्ची सुरुङमार्ग अवलोकन